Wax Yaabaha Laga Rabo in ay Ka Fagaato Hooyada Uurka Leh |
Maxaa Laga Dhaxlay Colaadihii Qabiilka? |Tukesomalism.com
Tuke Somalism, April 28, 2016
Abshiro Axmed Cabdi — May 6, 2019
Hooyada uurka leh waxay unugushahay in ay soo wajahaan cuduro badan. Sitaasa looga hortago waa in kafagaat Waxa yaaĺo soosocdo:
1) Dadka Xanuusan
Hooyada uurka leh waa inay kafagaato dadka xanuusan si uusan cudurku usaamayn iyada iyo cunigeedaba. Xanuunada qaara sida Jadeecada(Meales) waa mid qatar ugaysan karo ilmaha uurka ku jiro.kuna sababi karo birth defect, Dhibatada Wadnaha iyo in uu cunigu dhinto. Sidas owgeeda waa in hooyada iska ilaalisaa dadka qabo xanuunada faafo.
2) Sigaarka iyo Alkahoolka
Sigaarka iyo Alkahoolka waa kuwo qatar ugaysan karo hooyada iyo cuniga. Tusale hadii hooyadu Cabto Sigaarka ama Alkahoolaka waxaa igu gudbinkartaa dhiiga. Waxuun ku sababi karaa in uudhashto isaga oo bilo dhamaysan am uudhinto. Haduu dhashto asagoi bilo dhamaysan waxuu halis ugalaaya in uu noqdo mid Caqligiisa iyo maskaxdiisa ay dhiman yihiin. Jir ahaan aan korin.
3) Daawoyinka aan muhiimka ahayn
Hooyada uurka leh had iyo jeerka daawoyinka ay qaadanayso waxay ugudbayaan Cuniga caloosha ku jiro. Waxaan jiro daawoyin qaar oo cuniga qatar galinkaro naftiisa. Cuniga caloosha ku jirana haduu xanuunsado hooyadu way xanuusanee. Waan in ayka ilaa iso daawoyinka aan dhaqtar u sooqorin oo haday xanuunsato la xariirto dhaqtarka haweenka si uu u xal ugu helo Cabashadeeda.
Cabashoyinka fudud ee hooyadu sheegato: Madax xanuunak, Caloola xanuunka iyo Hargabka waxaa daawo uga dhigi kartaa in ay qaadato biyo badan. Biyaha waa kuwo aan la sookobin karin faa’idadooda. Waxaan la sheegaa in ay daawo uyihiin Cuduro badan.
4) kiimikooyinka wax lagu nadiidiyo
Kimikooyinka waa kuwo dhibato badan leh qaasatan hooyada uurka leh waa inay iska ilaaliso kimikooyinka sida kolariinta iyo sunta cayayaanada lagu dilo. Waa in lagu keediyo meelka baxsan guriga.
Tags: Wax Yaabaha Laga Rabo in ay Ka Fagaato Hooyada Uurka Leh
Next post Caqliga iyo Maskaxda
Previous post Sidee Lagu Xallin Karaa Dhibaatooyinka Qoyska?